ချစ်ရသူ တစ်ယောက်ကို အပြီးတိုင် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါ - Hello Sayarwon
ချစ်ရသူ တစ်ယောက်ကို အပြီးတိုင် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါ
ကိုယ်ချစ်ရခင်ရသူ တစ်ယောက်ကို အပြီးတိုင် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်းဆိုတာဟာ ဘဝရဲ့ အခက်ခဲဆုံး အချိန်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဒီလို လက်လွှတ်လိုက်ရပြီဆိုရင် ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အဆင့် (၅) ဆင့် ရှိပါတယ်။
အဆင့် (၁)။ ။ ငြင်းဆန်ခြင်း
တစ်နည်းအားဖြင့် ချက်ချင်း လက်မခံနိုင်လိုက်တာပါ။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်က လောကကြီးထဲမှာ မရှိတော့ဘူးဆိုတာကို ချက်ချင်း ဘယ်လက်ခံနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါဟာ သဘာဝပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှည့်စားနေစဉ်ကာလပေါ့။
အဆင့် (၂)။ ။ ဒေါသ
အမှန်တရားကို တစ်ဖက်က သိပါလျက်နဲ့ ငြင်းဆန်နေရာက ဘယ်လိုမှ ငြင်းပယ်မရတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာ အလိုလို ဒေါသတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဘာလို့ သူမှတဲ့လဲ။ သူ့အစား ကိုယ့်ကိုပဲ ခေါ်သွားပါတော့လား စသဖြင့် အတွေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှောင်ပိတ်ထားရင်း ဒေါသတကြီး ဖြစ်လာပါတယ်။
အဆင့် (၃)။ ။ အကယ်၍များ
တကယ်လို့များ စောစောသာ ကြိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်…. တကယ်လို့များ တခြား ဆေးရုံကို ခေါ်သွားလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်…. တကယ်လို့များ သူ့အပေါ် ပိုကောင်းပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်… တကယ်လို့များ….
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ယမမင်းနဲ့ သွားပြီး အပေးအယူ လုပ်လို့ ရှောင်လွှဲမရတဲ့ အရာတွေကို ပြန်တောင်းဆိုချင်မိတာ လူတိုင်းပါ။ ဒီလို တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့အတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေကလည်း ကပ်ပါလာတတ်ပါတယ်။
အဆင့် (၄)။ ။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း
ပူဆွေးဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ တွဲဖက်ပါလာတာက စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းပါ။ ဒီအခြေအနေမှာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းက (၂) မျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ယှဉ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းပါ။ ဆိုလိုတာက သူမရှိတော့တဲ့ နောက်ပိုင်း ဖြစ်လာမယ့် အရာတွေကို စိုးရိမ်ပူပန်နေရင်း ကိုယ်မလုပ်နိုင်မယ့် အရာတွေအတွက် စိတ်ဆင်းရဲရခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကို နှုတ်ဆက်ဖို့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ အချိန် နဲ့ နေရာလေးတစ်ခု လိုအပ်ခြင်းပါပဲ။ တစ်ခါတလေ အလိုအပ်ဆုံးအရာက ရိုးရှင်းတဲ့ ပွေ့ဖက်မှုလေး တစ်ခု ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့။
အဆင့် (၅)။ ။ လက်ခံခြင်း
ဒီအဆင့်ကို ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အရာအားလုံးကို လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ချထားခဲ့ပြီး ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ အသင့်ပြင်နိုင်တဲ့ အချိန်ပေါ့။
အစားထိုးမရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်ရမှာတွေက အတိုင်းအဆ မရှိတဲ့ နာကျင်မှုတွေပါပဲ။ အချိန်လွန်သွားပြီးမှ သူနဲ့ အတူတူ မနေပေးခဲ့ရလေခြင်း၊ သူ့ကို အဖော်မလုပ်ပေးခဲ့လိုက်ရလေခြင်း ဆိုတဲ့ နောင်တတွေနဲ့ ကျန်မနေအောင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေကို ချစ်ကြောင်း ထုတ်ပြတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်သင့်နေပါပြီ။
တကယ်တော့ သေခြင်းတရား နဲ့ ခွဲခွာရခြင်းဟာ ဘယ်အချိန် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့လည်း တံဆိပ် ကပ်မထားဘူးမဟုတ်လား။ နွေးထွေးတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေကို အကောင်းဆုံးထုတ်ဖော်ပြသရင်း အချိန်ရှိတုန်းလေးမှာ ပျော်ရွှင်ကြင်နာဖို့ မမေ့ပါနဲ့။